ချက်တင်ကစားတဲ့ ၁၈ ပေါင်း - ဗီဒီယိုချက်တင်-အချစ်အွန်လိုင်း!
၏အရေအတွက်ရုရှားအမျိုးသမီးဆန္ဒရှိသောသူသွားဖို့ပြည်ပသာခြောက်လအတွင်းအတိုးတစ်ခုနဲ့ဆခွဲတွင်ရုရှားနိုင်ငံ။ နှင့်အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းလမ်းနှင့်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းအတွက်ရုရှားအမျိုးသမီးအခြေချဖို့အမြဲတည်ထောင်နှင့်အတူနိုင်ငံခြား။ ရုရှား၌၊စစ်တမ်းများ အမြဲတစေရေအတွက်အပေါ်ရုရှားချင်သူအခြေချ။ အဆိုအမျိုးမျိုးသောလေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်အတိတ်ဆယ်နှစ်၊ဒီပုံအတွက်ပျမ်းမျှအားဖြင့်အနှစ်။ နှင့်မကြာသေးမီက၊စစ္တမ္းတြင္ထုတ္ေသုတေသနပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်က:ဒါဟာထွက်လှည့်မဟုတ်ထဲကလူတဦး၏ငါး၊အိပ်မက်များ၏ထွက်ခွာရုရှားနိုင်ငံ(အဖြစ်အမှုယခုနှစ်နွေရာသီတွင်၊ဥပမာအားဖြင့်)သုံးပုံတစ်ပုံ(သုံး-တ)။ အခြားလူငယ်များ၏ရှစ်နှစ်-လေးနှစ်၊တဦးတည်းအတွက်နှစ်ဦးအိပ်မက်အခါမွာေတာ့(လေး-ရှစ်)။ ဆက်စပ်ရာအရပ်မှအမြဲတမ်းနေအိမ်သို့၊ထိုဦးစားပေးပြောင်းလဲပြီအတန်ငယ်:သာ၏သုံးပုံတစ်ပုံသောသူတို့အနေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံသားရွှေ့ဖို့လိုလားဖို့ဥရောပ(ခုနစ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၊ငါး၊စောင့်ကြည့်သွားဖို့ရှိပါတယ်)။ လူကြိုက်များ၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်လည်းကျဆင်းသွားသည့်နှစ်များ၏သုံးမှကိုး။ ဒါပေမယ့်အရေအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသောသူတို့အားအရှေ့ပိုင်းနိုင်ငံများနှင့်အာရှ၊တောင်အမေရိက၊ဩစတြေးလျနှင့်တောင်တရုတ်တိုးပွါး။ စကားလုံးတစ်လုံးအတွက်၊နေရာတိုင်းဖြစ်ပါသည်၊အဘယ်မှာရှိ ရုရှားကြသည်မဟုတ်။ ဤအချိန်ကာလအတွင်း၊ပညာရှင်တွေပြီးသားစတင်နေကြောင်းပြောဆိုရန်၏အစအဦး၏အသစ်တစ်ခုကိုလှိုင်းလုံးကိုယ္ရဲ-ထိုကဲ့သို့သောသူများအဖြစ်ဖုံးအုပ်ရုရှားရဲ့အစမှာကိုးနှစ်။ ထိုအခါ၊၏အနာဂတ်အဖြစ်သူဗီယက်ခံရဖို့သလိုပဲအရမ်းအရေအတွက်လူအတော်များများ။ ယနေ့၊ရိုးသားဖို့၊ရှင်းလင်းပြတ်ခဲ့ဘူး။။။။။ ကိုမိန်းမများအကြားမှရုရှားသူသွားချင်ပြီးသူများထက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောသူ၏မိသားစုနှင့်သူအတစ်ခုတည်းရှိပါတယ်။ နှင့်ဤအချက်ကိုအလွန်ရိုးရှင်းစွာအခြေအနေ-သင်သိသည့်အတိုင်း၊တဦးတည်း၏လူကြိုက်အများဆုံးနည်းလမ်း၏အခြေချခဲ့သည်၊နှင့်အကြွင်းအကျန်၊အတူတစ်ဦးလက်ထပ်ထိမ်းမြားခင်ပွန်းနိုင်ငံခြား။ ဤအအလှဆုံးမိန်းကလေးများနိုငျသောပုံစံအဓိကကျောရိုး၏ တွင်ကိုးနှစ်အ:ထိုအခါအဓိကတိုင္းရင္းသားမာန်နှင့်ယုဒထွက်ရုရှားနိုင်ငံ။ ငါတို့သည်သင်တို့မေးလျှင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိ၏မေးခွန်းကိုအဘယ်အရာစောင့်ကြိုသောအဆင်းလှသောရုရှားသတို့သမီးအတွက်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်။ ရုပ်မြင်သံကြားဖန်သား၊ကျနော်တို့အကြောင်းပြောနေတာနေကြတယ် မ"ကံဆိုးမိုက်ရုရှား၊"သူတို့ဖြစ်ကြသည်အဖြစ်အများအားဖြင့်၊အရာအတွက်သားသမီးပြန်ပေးဆွဲခြင်းအားဖြင့်သူ၏ခင်ပွန်းသို့မဟုတ်သွားဏာပိုင်နိုင်ငံခြား။ သို့သော်၊စာရင်းဇယားပြပွဲကြောင်းမိုက်ရုရှားကြသည်မဟုတ်ဒါကြောင့်မို့၊တကယ်တော့။ အဆိုအရသူက ၊ဦးခေါင်း၏အတုိက္ဆုိင္မႈရုံးမော်စကိုမြို့၊အမျိုးသမီးအတွက်မော်စကို၊အိမ်ထောင်သည်နှင့်အတူနိုင်ငံခြားသားများကိုကွာရှင်းလေးကြိမ်ထက်လျော့နည်းမကြာခဏနှင့်အတူမိမိတို့နိုင်ငံသား။ ကိုယ်အဘို့တရားသူ:နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း၊ မျိုးသမီးများအတွက်မော်စကိုလက်ထပ်နှင့်နိုင်ငံခြားနိုင်ငံသားများ။ သို့သော်၊အကြားလက်ထပ်ထိမ်းမြား၏ဤအမျိုးသမီးနှင့်အတူနိုင်ငံခြားနိုင်ငံသားများအပေါ်ရေတွက်နှစ်ခု၊ငါးကွာရှင်း၏။ အဖြစ်ယခင်နှစ်များတွင်၊လူကြိုက်များမော်စကို၏အထူးသဖြင့်အထိခိုက်မခံတဲ့တူရကီ။ ထို့နောက်လာအမျိုးသားများ၏ဂျာမနီ၊အစ္စရေး၊အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊အင်္ဂလန်၊အီတလီနှင့်ပြင်သစ်။ စတင်ဖွင့်ကြကုန်အံ့နှင့်အတူ။ ဒီမှာ၊တယောက်လုပ်နိုင်ဘူးငြင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ မတူဘဲရုရှသူအမျိုးသမီး အတူဗမာသို့မဟုတ်အမေရိကန်၊သင်ဆက်ဆက်မပေးနိုငျအပြစ်ရုရှားမိန်းကလေးတစ်ဦးကိုလက်ထပ်အားဖြင့်ငွေကြေးအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူလူတ။ ထိုဆန့်ကျင်ဖို့အတော်လေး။ ဤတာကစ်ယောက်ျားပိုပြီးမကြာခဏကြားအနိမ့်လူမှုအတန်း:ဆင်းရဲသောသူတို့သည်၊အရေအန်ထမ်းနှင့် အတွက်ခရီးစတိုးဆိုင်များ။ ဒါကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူသူတို့အဘို့အရင်းနှီးသူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်အတူလရုရှားအမျိုးသမီးဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့၏အသိပညာများ၏ရုရှားဘာသာစကား။ ရှိသည်ဖို့ခင်ပွန်းရန်လိုအပ်သည်သွားဖို့အတွက်အခြားအာင္ငံမ်ား၊ေဆာ္ဒီအာေသို့မဟုတ်အာရပ္ေစာ္ဘြားနုိင္ငံ၊ဒါပေမယ့်သင်သိရန်လိုအပ်သည်ဗမာများသိမှရ။ နှင့်ဆက်ဆံရေးကျွန်ုပ်တို့၏ရုရှားအမျိုးသမီးနှင့်အတူ၊သင်သိသည့်အတိုင်း၊ပါ့ဗ်ာ။ ရုရှားမှာ၊အဆိုးမြင်မှိုင်းသည်ကျယ်ပြန့်၊အညီအရာကယောက်ျား၏အစာငတ္ခံဆႏပေးလှုပ်ရှားမှု၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုသူတို့ရဲ့အမျိုးသမီး။ သို့သော်အမှန်မှာ၊အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်နိုင်ငံခြားမယားကဘာသာတရားအဆုံးရွိတဲ့ႏိုင္ငံ။ မြတ္စလူသား ခွင့်ပြုဖို့လက်ထပ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏မည်သည့်နိုင်ငံသား၊ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်မြတ္စ၊ခရစ်ယာန်သို့မဟုတ်ဂျူး(လေးဘာသာတရား၊ဒါဟာလက်ထပ်ဖို့တားမြစ်၊မည်သည့်အကြောင်းပြချက်၊သာနှင့်အတူအမျိုးသမီးဝါ)။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊တစ်လင်အမျိုးသမီးမေမလက်ထပ်။ ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်နိုင်ငံခြားမယား၊အစ္စလာမ့်ဥပဒေအလွန်လစ်ဘရယ်:ရုရှားအမျိုးသမီးများကိုလက်ခံနိုင်အစ္စလာမ်၊ဒါပေမယ့်သူမကအများလက်ခံရန်မပြုစေခြင်းငှါ။ သို့သော်၊ကလေးတွေကိုထိုကဲ့သို့သောမိသားစုရမည်ဖြစ်တတ်အားဖြင့်။ ရုရှားအမျိုးသမီးအဘယ်သူသည်လက်ထပ်တစ်ကီသို့မဟုတ်အရပ်အဆင်သင့်ဖြစ်သင့်သည်ဖြစ်အပျက်အတွက်ကွာရှင်းချန်ထား၊သားသမီးမ်ားနောက်ကွယ်မှနှင့်အတူသူမ၏ခင်ပွန်း၊အတိအကျသောကြောင့်သူသည်ကိုယ်ကိုမမြှင့်တင်အားဖြင့်သူတို့ကိုသည့္အဖြစ်ဥပဒေအရလိုအပ်။ ဒီဖြစ်ကောင်းအဓိကအားနည်း၏ထိုကဲ့သို့သောလက်ထပ်ထိမ်းမြားအတွက်ရုရှားအမျိုးသမီး။ ဒါပေမယ့်အကြားအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်၊တကယ်တော့၊လိုအပ်ခဲ့လျှင်၊ဒါကြောင့်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူကိုပြန်ရောက်စေဖို့မိမိသားသမီးကိုကြက်ဆင်အဖြစ်၊တစ်နိုင်ငံအဖြစ်ဖင်လန်နိုင်ငံ။ ထို့အပြင်၊အဖြစ် ပြောင်းပြန်၏တံဆိပ်၊ဟုပြောရန်ဖြစ်သည်၊အကြားဆက်ဆံရေး၏အသဒေါက်အသင်းတော်ကိုအထိမ်းအတူအျခားဘာသာတရားမ်ားႏွ:ထိုကဲ့သို့သောလက်ထပ်ထိမ်းမြားကြတားမြစ်သည်နှင့်အညီအတွင်းအသင်းတော်၏။မပဒေါက်အမျိုးသမီးမဟုတ်သလိုအမ်ိဳးသဒေါက်မဖြစ်စေခြင်းငှါထောင်အတူကြပြီမဟုတ်သူလူများပြန်အတွက်ဒေါက်အသင်းတော်၊အရာဆိုလိုသည်၊ထိုကဲ့သို့သောအပည္ေထာင္စုထဲက၏အမြင်ကိုရုရှားသြသဒေါက်ချာ့လိမ့်မည်တရားမဝင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ငါ့မိတ်ဆွေအခါ၊သူမလာသောအသင်းတော်၏အကြံပေးချက်ကိုရှာခြင်းငှါအထားသောယဇ်ပုရောဟိတ်၊ကိုအောက်ပါပြန်ကြားချက်:'ဒါဟာဆုံးဖြတ်သင့်အားတက်သောအသငျသညျပိုအရေးကြီး-ဘုရားသခင်ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့စေ့စပ်မြတ္စ။' ဒါပေမယ့်မွတ်စလင်တစ်ဦးသောသူကိုအလွယ်တကူလက်ထပ်ဇနီးဒေါက်သာ။ စကားမစပ်၊စာရင်းဇယား၊လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏ဒေါက်နှင့်အတူမိန်းမတို့အလြန္အလွန်တည်ငြိမ်ပြီး။ ရ ၊ဦးခေါင်း၏အရုံး၏အမေးအစိုးရ၏အသမ္မတနိုင်ငံ၏လျှပ်တစ်ပြက်ဘဝကို၊အရေအ လက်ထပ်ထိမ်းမြားအတွက်တိုးမြှင့်အသမ္မတနိုင်ငံ(သူတို့ကိုယ်စားပြု၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏လျှပ်တစ်ပြက် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း)။ ထိုအခါလူတို့၏တာကွာရှင်းနှစ်ဦးဆလျော့နည်းမကြာခဏသည့်အခါသူတို့အိမ်ထောင်သည်နှင့်အတူရုရှားအမျိုးသမီးအ နှင့်အတူ နှင့်အတူရုရှား။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားအတွက်အမျိုးသမီးနှင့်အတူမော်ပစ္ေတို့တွင်အထိပ်သုံးအကြားလက်ထပ်ထိမ်းမြားအတူနိုင်ငံခြားလူတို့။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုကြောင့်ဣခဲ့မှတ်ယူနှင့်နေဆဲတစ်ဦးအဖြစ်မှတ်ယူအများဆုံးလက်တွေ့ကျတဲ့အချက်၏အမြင်ချေ။ တကယ်တော့၊အချို့မြို့၌ဣသရ၊လူတိုင်းပြောသီးသန့်အတွက်ရုရှား။ ရုရှားအမျိုးသမီးများကိုမလျော့၊မဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်နောက်ဆုံးနှစ်အနည်းငယ်မှာအစ္စရေး၊အရာအားလုံးအတွက်တိုးပွားလာခဲ့သည်။ အချို့"အစ္စရေး"အထူးသဖြင့်ကောက်ကျစ်ပင်လာဖြုန်းဖို့အချိန်သည်ဆောင်းကာလအတွက်ရုရှားနှင့်အတူမိမိတို့ချစ်ရသူ။ အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်၊ဣသရေသည်ပထဝီအနေ၏အလယ်တွင်တည်ရှိသည်အာရပ်နိုင်ငံများသည်သာအမျိုး၊သောကြောင့်ဓာတ်ငွေ့တင်ပို့ဖို့။ ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်၊စျေးနှုန်းဓာတ်ငွေ့(အပူ)ရွား ချစ်သောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌။ ဂျူးတားမြစ်ချင်းချင်းလက်ထပ်သော-အယုဒ၊အထူးသဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်နေကြအဆိုပါအမျိုးသား(ဂျူး၊ကျနော်တို့သိရအဖြစ်၊ကအမိ)။ သို့သော်၊အဆိုပါဥပေဒ၏ယုံကြည်ခြင်းအဘို့များစွာသောဂျူး၌နေထိုင်သောရုရှား၊မပြည့်စုံရန်အစာအရေအတွက်:ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းတွင်ရုရှားနိုင်ငံ၊အဆိုအမျိုးမျိုးခန့်မှန်းသည်နှစ်ဦးထံမှငါးခုမှ။ စကားမစပ်၊အစည္းအေဝးျလစ်နှင့်ပေါင်းစည်းရေးအဆောက်ဖို့ဣကျင်းပခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့လမှမြှုပ်နှံခဲ့တယ်၊ထိုပြဿနာ၏။ အတွင်းအစည်းအဝေး၊အဆိုပါစာရင်းဇယားထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြ၊အရာပို။ကနေ. ထားခဲ့ဣသရေ(ပြန်ဖို့ရုရှား)။ အဓိကအကြောင်းပြချက်ကိုငြင်းဆန်၏အ ၏အစိုးရမှတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုရန်အဖြစ်အဓိကရုဏ်းများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်အတွက်နှင့်အတူအကျိုးဆက်များ။ မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်အတွင်းအစည်းအဝေးအကြောင်း၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်သောအင်အားရုရှားကိုထားခဲ့ဖို့ဣသရေသည်အဆင်းရဲ အခက်ခဲလူနေမှုအခြေအနေ။ ဤအရာကိုအများအပြားရုရှားနိုင်ငံသားများအကြောင်းရေးသားတဦး၏အကျယ်အဓိကရုဏ်း။ 'ထို့ကြောင့်အစအဦးမှာ၊ကျွန်တော်တို့လက်ခံခဲ့ကြသကဲ့သို့ဂျူးဖို့ခွင့်ပြု၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ၊ဒါကြောင့်ချက်ချင်းအကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်မဟုတ်ဂျူး၊ရလိုင်းများနှင့်အကျွန်ုပ်တို့၏အဘ။ ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ချက်ချင်းမပြောပြကြောင်းမယု။ နှင့်အဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ကြပြီ-သူတို့ကဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေးနရာတကယ်စေသောအဖြစ်။ သူတို့လိုအပ်ပြီး၏ပုံစံအတွက်လက်လုပ်ဒီမှာ၊သို့မဟုတ်အဘယျသို့။"စောဒကဆိုသည္။ 'ငါဖြစ်ရုရှား၊ငါ့ခင်ပွန်းသည်ဂျူး။ ရိုးရိုးသားသား၊ငါဘယ်တော့မှအလိုကဒီမှာလာရန်အဆုံးအထိငါမျှော်လင့်ခဲ့သည်သူတို့ကငြင်းဆိုမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာ။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမ၊သူတို့ပြုကြပြီမဟုတ်ဒါကြောင့်။ နှင့်ဤအများအတွက် နှစ်ပါကျန်ရစ်သူအတွက်ကဒီၥေ။ ငါသည်လက်ဝဲငါ့မိသားစု၊ငါ့အလုပ်၊ငါ့တိုက္ခန္း၊ငါ့သူငယ်ချင်းတွေ။ အကြောင်းကားအဘယ်သို့ငါမည်။ ငါသည်အမျှသူငယ်ချင်းတွေ၊ငါဘယ်သူမှပြောဖို့၊ကျွန်မခင်ပွန်းအလုပ်မှာအားလုံး အချိန်၊ကျွန်မကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်ဖို့အလုပ်တခုကို၊ငါတူခံစား é"၊။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားအတူသြစတြေးလျ၊မပင်သို့ဝင်ထိပ်တန်းတကျိပ်။ ဒါကကံ။ လူအနည်းငယ်ကသာသိသြစတြေးလျများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်အနည်းငယ်တွင်ခရစ်ယာန်နိုင်ငံများ၏အရေအတွက်ကိုအမျိုးသားထက်အများကြီးပိုမြင့်သောအမျိုးသမီးများ(ထိုကဲ့သို့သောအကျိုးအတွက်ယေဘုယျလက္ခဏာများမွတ်စလင်နိုင်ငံများနှင့်တရုတ်နိုင်ငံ)။ သင်သြစတြေးလျအစိုးရတို့တောင်သတ်မှတ်ထားမှာအဆင့်အဘို့ဆွဲဆောင်အမျိုးသမီးမှအခြားဆင်းရဲသောနိုင်ငံများ(အပါအဝင်အာရှအမျိုးသမီးနှင့်ရုရှားအမျိုးသမီး)။ အသစ်သောမယားအသက်ရှင်နေထိုင်ရပါမည်နှင့်အတူသူမ၏ခင်ပွန်းအတွက်နှစ်နှစ်ပြီးနောက်၊အရာသူမကတစ်ဦးနေအိမ်သို့ပါမစ်။ သြစတြေးလျဥပဒေအပြည့်အဝဘေးထွက်အပေါ်အမျိုးသမီးများ၊ဒါကြောင့်လည်းကြီးမားတဲ့အပေါင်း။ ဒါဟာသြစတြေးလျ၌ကရုရှားအမျိုးသမီးများကိုမကြာခဏအနိုင်ပေက်ာင္းသူတို့ရဲ့ခင်ပွန်းတစ်ဦးရရှိရန်ပင်စင်များမှာသိသိသာသာ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ဥပမာအားဖြင့်၊ရိုးရိုးရာ့ရဲကိုအၾကမ္းဖက္မႈအ အိမ်ထောင်ဖက်။ ဒါဟာစပ္သ:ရုရှားကဖြစ်မှတ်ယူဆင်းရဲသောနိုင်ငံ၊နှင့်အတူ၎င်း၏အရင်းအမြစ်များနှင့်အနည်းငယ်နှင့်အတူချုံဖုတ်နှင့်သဲကန္တာရသည်ငွေရတတ်သော။"မယ်ဆိုရင်သင့်အိမ်ထောင်ဖက်အညီနိုင်ငံသား၊ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရင်းအမြစ်များ၊ဆံ၊ချဲ့ထွင်၏အခွင့်အလမ်း၊နှင့်သင်၏သားသမီးကြီးပြင်းလာသည့်ပညာရေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုချမ်းသာ၊သူတို့သိကြတယ်၊ဘာသာစကားနှစ်ခု၊နှစ်ဦးကိုယဉ်ကျေးမှု။ အထွေထွေစည်းမျဉ်းအဖြစ်၊ထိုမီး ပိုမိုတည်ငြိမ်များမှာကုမ္ပဏီအတွက်၊သူတို့ဘယ်လိုသိဖို့ကောင်းလိုက်လျောညီထွေအတွက်တူညီတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်။ '.
ဘယ်လိုဆောက်လုပ်ဖို့တစ်ဦးဆက်ဆံရေးဟာယောက်ျားနှင့်လောလောလတ်လတ်မှာကွာရှင်း။ အဘယ်လှည့်ကွက်ကိုနားလည်ရန်သူ့ပူးတွဲဖို့သူ့ရဲ့အတိတ်နှင့်မဖိ။ ဒီဗီဒီယိုထဲမှာငါသည်သင်တို့အားဟောပြော၏အခြေအနေကကျွန်မမကြာခဏကြုံတွေ့ရအတွက်နည်းပြ၊ဒီလိုတဲ့အခါအဖြားခဲ့သူလူတပဲကွာရှင်းပြီးသူအသေးအပြည့်အဝအဆင်သင့်ဖြစ်နေရန်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ။ ခံစားရအပေါ်အဆိုပါခုခံ၊တခါတရံပင်သံသယဖြစ်ဖွယ်။ သူကကြိုးစားမှ မိမိကိုယ်ကို၊သင်မူကား၊များသောရိုက်ချက်မပေးပါဘူးအားလုံးသူမ၏ယုံကြည်။ ငါ့ရည်မှန်းချက်နားလည်သဘောပေါက်ကူညီကွာရှင်းများအတွက်မထုတ်လုပ်မှားများနှင့်ဆန့်ကျင်အပေါ်သူတို့အဆောင်အများဆုံး။ အပိုလူဖြစ်ရလိမ့်မည်နှင့်အပြီးသင်ရှိသည်လိမ့်မည် အခွင့်အကြောင်းအပြည့်အဝအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်။ ဒီကောင်းတစ်ဦးအချိန်ဖြစ်ပါသည်ဆောက်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူနှင့်အတူတစ်ဦးဆက်ဆံရေးတစ်လင်ကွာသောယောက်ျား၊ကိုဘယ်လိုနားလည်အောင်နိုင်မှဒါဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲနှင့်ကျန်ရှိသော။ သငျသညျမဆိုမေးခွန်းများရှိပါက၊တွန့်ဆုတ်ကြဘူးကျေးဇူးပြုအကြှနျုပျကိုမေးမြန်းဖို့အမှတ်ချက်များအတွက်၊ငါသည်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်တုံ့ပြန်ရန်။ ဒီအတွက်၊ကျေးဇူးပြုဖို့တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့လာပြီးတိုင်ပင်ငါ့ဆိုက်။
ဖျော်ဖြေဒီလေ့ကျင့်ခန်းအနည်းငယ်ပိုပြီးရှုပ်ထွေး။ သူတို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်မှပိုအဆင်ပြေမှာပါ။ သငျသညျဖွစျရမညျအသျှင်၏။ ပထမဦးဆုံးအောက်ခြေအထိရောက်၏တုံ။ အတိုး၏အလေ့ကျင့်ခန်းမှသင်ခွင့်ပြုရန်နားလည်၏အတိမ်အနက်ဝှမ်းနှင့်အဆက်အသွယ်၏။ လိုလုံးဝသူ၏အောက်ခြေအဝှမ်းအတူလက်။ သင်သည်လည်းအနေနဲ့အရာဝတ္ထု(မျက်မှန်၊မျက်နှာဖုံး)ပြီးတော့ဖမ်းရန်ကြိုးစား။ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နှင့်ကိုယ်ရေနေသတ္တဝါများ၊ပတ်ဝန်းကျင်၊အကအရေးအကြောင်းသင်တို့လက်ခံရှိသည်ဖို့အတွက်ရေနှုတ်။ လှည့်လုံးဝခေါင်းအောက်ရေ၊ဒါပေမယ့်ဒီအချိန်စောင့်နှုတ်ကိုဖွင့်။ အခါဤလေ့ကျင့်ခန်းအောင်မြင်သော၊အသက်ပြင်းပြင်းရှူပြီးတော့ထည့်သူ၏ဦးခေါင်းကိုအောက်ရေမှုတ်ရေထဲသို့မှတဆင့်နှုတ်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်လုပ်ပါ၊မှုတ်ပိုပြီးခက်ခဲများနှင့်ကြာကြာတော့၊သင်လိုအပ်ရန်ကြိုးစားမှလုံးဝအချည်းနှီးသင့်ရဲ့အဆုတ်။
ငါခရီးသွားလာအဒူဘိုင်းမကြာခဏငါအဘယ်ကသိလိုသောဒေသခံမိန်းကလေးငယ်များထွက်ဆွဲထား။ သာအေးမြရာဌာနငါတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်၊အဆိုပါကျောက်လုံးကြီးအောက်ခြေက၊ဒါပေမယ့်ဒါဟာအများအားဖြင့်ခရီး။ ငါခရီးသွားလာအဒူဘိုင်းမကြာခဏငါအဘယ်ကသိလိုသောဒေသခံမိန်းကလေးငယ်များထွက်ဆွဲထား။ သာအေးမြရာဌာနငါတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်၊အဆိုပါကျောက်လုံးကြီးအောက်ခြေက၊ဒါပေမယ့်ဒါဟာအများအားဖြင့်ခရီး။ ပဲကြသည်မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဝတ်ဆင် တော့ဘူးမဆိုလိုပါဘူးသူတို့တွေတွင်မဟုတ်။ ထိုသို့ရှားပါးသောဖြစ်တယ်၊ဒါပေမဲ့သူတို့တည်ရှိခဲ့ကြနှင့်အတူထွက်အများအပြားမီ။ ငါမှစီမံခန့်ခွဲပြောဆိုရန်၊ဒါပေမယ့်သူမကအတော်လေးရှက်တတ်ခဲ့။ မျှော်လင့်ပါတယ်လာမယ့်အချိန်။ ငါသတိပြုမိသောအချိန်အများစုမှာ၊ကပါဘူး၊သူကိုကြည့်ရှုရန်အသုံးပြုမှာဘုရားသခင်ကယ်တင်မိဖုရား၊အာရဗစ္တြဒါကြောင့်ချစ်စရာ။ သူတို့ကပိုဆွဲဆောင်မှုဖြူထက်ငယ်တင်ဝတ်အချည်းစည်းပေါ်ကမ်းခြေမှာမဆိုကြိုးစားအဆိုပါဟိုတယ်အရက်ဆိုင် ဒါမှမဟုတ်မော်လ်ဒူဘိုင်းနှင့်သင်တွေ့လိမ့်မည်အများအပြား'ကောင်း'မိန်းကလေးများနိုင်သူအဖြစ်ဒေသခံတိုင်းသင်ပေးဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်။ မဆိုကြိုးစားအဆိုပါဟိုတယ်အရက်ဆိုင် ဒါမှမဟုတ်မော်လ်ဒူဘိုင်းနှင့်သင်တွေ့လိမ့်မည်အများအပြား'ကောင်း'မိန်းကလေးများနိုင်သူအဖြစ်ဒေသခံတိုင်းသင်ပေးဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်။ ငါမုန်းပေးဆောင်။ သင့်စွန့်ပစ်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းအင်နှင့်ငွေ။ ကယ်လိုရီအလွန်စျေးကြီးတယ်အခုတော့တစ်ဦးရက်။ မိန်းကလေးများဆုံးရှုံးဖို့ဘာမှမများ။ ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်မှာသူတို့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လတ်ဆတ်သောနောက်မိနစ်အနည်းငယ်။ ဒါပေမယ့်ပြီး ၊ဦးနှောက်ဆဲလ်၏လူတို့အိပ်ပျော်သွားပါ။ ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမြဲအခကြေးငွေအိပ်ချင်မူးတူးပြီးနောက်။အီး။ႏွင့္။လက်မစိန်၊ဦးပြောနေတာကိုငါဘာကိုသိ ။။။။။ သွားရောက်ကြည့်ရှုအားဖြင့်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုသင်ဝန်ခံအားလုံးပို့စ်များမှဖန်ဆင်းင့်ကအဲဒီဖိုရမ်များဖော်ပြအမြင်များနှင့်ထင်မြင်ချက်များရေးသားသူမချုပ်ရေးမှူး၊အိပ္ခသို့မဟုတ်မာစတာ(မှလွဲပို့စ်များအားဖြင့်ဤလူမျိုး)နှင့်အရပ်မည်မဟုတ်တာဝန်ရှိသောကျင်းပ။
သို့သော်၊အများကြီးအမျိုးသမီးစီမံခန့်ခွဲဖို့အလုပ်အစည်းအဝေးတစ်ခုဒါပေမယ့်ဘယ်လောက်သိကြပါဘူးထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ယောက်ျားနှင့်ထို့ကြောင့်တစ်ဦးအခြေအနေအကြောင်းမကြိုက်ပါဘူး။ အခါယောက်ျားသည်ဝေးလံခေါင်ဖျားနှင့်ချင်ပါဘူးသူတစ်ဦးအလေးအနက်ဆက်ဆံရေးသို့ဝင်၏အသက်၊သင်ပေးဖို့ဘယ်လိုမသိရပါဘူးပြုမူသည့်အခါအထူးသဖြင့်သင်ရှိသည်။ သင်လုပ်ချင်ဖို့တွန်းအားကြောင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့၊သင်ချင်တယ်စုံတွဲတစ်တွဲများအနက်၊ဒါပေမယ့်အလုပ်မျှော်လင့်ချက်များဖြည့်ဆည်းသင့်ရဲ့မပြုနှင့်ဆက်လက်မလိုအပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ အားကၽြန္ဳပ္ထံေယောက်ျားနဲ့လူအလူရင်းနှီးမြှုပ်နှံနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံ၊သို့သော်၊အတွက်။ အောင်နိုင်ယောက်ျားနှင့်အောင်မေတ္တာတစ်ဦးကလူကို။ ရထဲကအတွေးလုံးဝ၊ဒါပေမဲ့သည့်အခါသူချင်ပါဘူးတစ်ဦးထက်ပိုတဲ့ဆက်ဆံရေးကမလိုအပ်သောတွန်းအားပေးရန်သူ့ကိုမဟုတ်ဘဲဖြစ်လာပိုင်များအတွက်အတိအကျအပြောင်းအလဲကို။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်၊ဒါကြောင့်အမဓလေ့ထုံးတမ်းများအတွက်အိမ်ထောင်ဘက်အိပ်။ ဒါပေမယ့်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ၊ဒီဘုံအလေ့အကျင့်။ ထွက်ရအောင်။ စိတ်ခံစားမှုၐနှင့်နက်နဲသောအရာဖြစ်ကြ၏လျှို့ဝှက်ချက်အအောင်မြင်မှုရဲ့၏ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲ။ ဒါကြောင့်၊အမေရိကန်သုတေ။ သိပ္ပံပညာရှင်များကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီစုံတွဲများမဟုတ်ကြဘူးသောသူကိုမှန်မှန်လုံလောက်တဲ့အိပ်စက်ခြင်းရ၊က်ာ္ႀဖြစ်ပျက်အများကြီးပိုပြီးမကြာခဏ။ စုံတွဲများပေးသူတစ်ဦးအပြည့်အဝအိပ်ထက်လျော့နည်းအကြံပြုထားတဲ့အချိန်(ရှစ်နာရီ)၊ပိုဆိုးသာသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်၊ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေး။
Kherson ဒေသသို့မဟုတ် Kherson ဒေသ၏ရည်းစား
ေရချင်သောသူတို့အရိုအ Kherson ဒေသ Kherson လူ
။ စတင်သောသူမိန်းကလေးတစ်ဦးလည်းခံစားခြင်းအကောင်အ Kherson ဒေသ Kherson၇၅ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်။ ငါ့အအကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်သည်ငါသဘောပေါက်နားလည်ကြောင်းအကြင်နာမှုလိုအပ်ကြောင်း။ ငါမူကားသိသောအဖြစ်သင့်လျော်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး။ တစ်လျောက်ပတ်သောယောက်ျားသည်။ မကောင်းတဲ့မြက်ပင်အလေ့အကျင့်။ ငါကြီးမားတဲ့ကျွန်းဆွယ်လံုးခ်င္းအိမ္ပင်လယ်၌ယူကရိန်း၏။×-ကျနော်တို့အATUရှာဖွေနေအဘို့အအလယ်တန်းအသက်လမ်းဖြစ်၏ဆုပ်ကိုင်အတွက်ငါ့အိမ် uminyaest လံုးခ်င္းအိမ္ကား simyy အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံသုံးသပ်ချက်များ vtaru palavinka shtoby။ ငါ့နာမကို Denise ၂၆ အသက်အနှစ်၊ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကစားအားကစားဆိုင်ရာလေးနက်တဲ့ဆက်ဆံရေးအဘို့အမိန်းကလေးခဲ့သူမြင်သူတစ်ကောင်လေးချစ်ကြိုက်ဘူးသောသူတို့ဆေးလိပ်သောက်။.
လက်ရှိအရာသည်အများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ဒီနေ့ကျနော်တို့အထူးဂိမ်း။ အမှန်မှာ၊သင်သိသည့်အတိုင်း၊အစီအစဉ်သည်တင်းကြပ်စွာအပေါ်အခြေခံပြီးအဆုံးအဖြတ်လုပ်ရပ်။ အသီးအသီးမိ-မိ-မိလည်းတစ်အကြိုက်ဆုံးမစ္ကီေမာက္စ္တီရွပ္။ ဤသည်အလွန်အရေးကြီးသောရန်ပွဲဖြစ်ရမည်နှင့်အတူလက်နက်အထူးကိရိယာကိုစိန်ခေါ်ဖို့ပစ်မှတ်နှင့်၎င်း၏ခြေသည်း။ ထိုအခါငါချင်ပါတယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။ "ပြန်ပြီးတော့၊အဆိုပါမစ်ရှင်"ခဲ့တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်။" အဆိုပါစာစောင်သည်"တစ်ညမှာဆရာ'စက်ရုံ"(မျဉ်းသား)Mohs'ထု၏ကျန်းမာရေးအသားအရေကစားရှင်းလင်းစွာဖုံးကွယ်ကြီးမားတဲ့အညိုရောင်မျက်လုံး။ သိမ်းပိုက်နှင့်အဖု။ ဟုတ်ကဲ့၊ဟုတ်ကဲ့၊ဒါကြောင့်ဒီက အချိန်အရသိကျွမ်းမဟုတ်သာ၊ဒါပေမယ့်လည်းထိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အလုပ်၏။ သုံးစက္ကန့်အစည်းအဝေးနှင့်စကားပြော"မဂၤ Masha Evlampia"၊ဖြစ်ရပ်များဖြစ်ကြောင်းဂုဏ်ယူစွာပြန်ပြောပြဖို့အထင်ကြီးမှတ်ဉာဏ်ကဒ်။ အနည်းဆုံးကြောင်းဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ရဲ့။ ဘာအလှအပအတွက်ကိုယ်သာမှန်၏၊အတိုင်းအစိတ်အပိုင်းရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအသွင်အပြင်(အညွှန်းကိန်းသာ)၊ငါခံစားခဲ့ရဆွဲဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နှင့်အတူဟာသကနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှု။ အမြဲတမ်းကျနော်တို့ဒီရာစုထဲမှာ၊အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများ၊ပွင့်လင်း၊ကိုယ်ကိုကိုယ်ပယ်ဖြတ်၊နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်ရိုးရှင်းတဲ့ကျွမ်း။ ဘာလဲ:အသင္းထွား bicep၊ချီးမွမ်း၊ဖုန်းသို့မဟုတ်ကား fetish၊အဘို့အထွက်သွားတဲ့ဘီယာမှာအားကစားဘားတန်းဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်၊သင်အဆိုပြု၊သင်လက်ထပ်။ အဘယ်ကြောင့်မြော်လင့်လျက်? မဟုတ်အချစ်အဆသောသူ၏ကော်ပိုရိတ်ဌာနချုပ်တည်ရှိပြီးဘယ်နေရာမှာအလယ်၌တစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောလား? ပီးရင္အဲဒီအမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်သိသည့်အတိုင်း၊လူသားမုဆိုးသဘာဝအားဖြင့်။ လူတို့မကြိုက်ဘူးဝယ်ဖို့ငါးအတွက်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာများအတွက်အမျိုးသားများအကြောင်းယှဉ်ပြိုင်ပြီးအနိုင်ရ၊ယှဉ်ပြိုင်ပြီးအနိုင်ရ။ အနိုင်ရ။ သူတိုဂိမ်းအနိုင်ရ၏မျက်နှာသာအတွက်"အသိပညာ"။ သင်ရှိပါကအရပ်ချဉ်းကပ်မှု၏၊သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအရေအတွက်၊သင်အသွားအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကစားရန်ပထမဦးဆုံးဆုချီးမြှင့်ဂိမ်းခဲ့သည်။ ကျွန်တော်မသေချာသင်သည်အစဉ်အဆက်ကြားဖူးတယ်။ အဆိုပါစိတ်ပညာရှင်ပြသကြောင်းရှိပါတယ်"တွင်အခက်အခဲရုန်းကန်ကြောင်းစဉ်းစားအရေးကြီးပါတယ်။" နှင့်ပြီဆိုပါကအခက်အခဲ၊ဤကိစ္စတွင်အတွက်၊နွေးထွေး။" ကျွန်တော်ကဘာလုပ်သေချာမဖြစ်၊ဒါပေမယ့်ငါသေချာပါတယ်သင်ကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာမဟုတ်ခဲ့ပါမည်သည့်စိန်ခေါ်မှု။ သာအခြားအငြင်းအခုံကြီးကိုအတူတက်လာဤကူျ။ ဤသည်စျေးကွက်အမြင်ကနေဒီအခြေအနေ။ နေတယ်ဆိုရင်တစ်ဦးသူဆဲသံသယ၏အရည်အသွေးရောင်းချသူရဲ့တရုတ်ထုတ်ကုန်များ၊စည်းရုံးသိမ်းသွင်းအခြားပါတီကသူတို့ကိုဝယ်ယူတဲ့အံ့ဖွယ်ရေခဲသေတ္တာသို့မဟုတ်အနှိပ်ဓာတ်မီးနှင့်အတူစား၏အိုးတလုံးနှင့်ဆံပင်လေမှုတ်စက်။ ဒီထုတ်ကုန်ရေပန်းစားလာခဲ့သည်၊ဒါကြောင့်သင်ဆုံးဖြတ်ရန်ကူးပြောင်းစျေးနှုန်း။ အဆန့်ကျင်တွင်၊အမှတ်တံဆိပ်ရောင်းချနေကြောင်းအဆိုပါထုတ်ကုန်လည်းယုံကြည်စိတ်ချသင်ရှိသည်ဖို့ကွဲပြားခြားနားသောအသားအရေမျက်နှာပြင်၊ဖြင့်မျက်နှာပြင်၊နှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများ။ ထိုကိစ္စတွင်အတွက်၊ ဝယ်သောသူရှိလျှင်ကိုယ်တော်တိုင်အဘယ်အရာကိုနားလည်တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်ပါသည်၊ထို့နောက်မိနစ်လိမ့်မည်မြှုပ်နှံဖို့အနုပညာရှင်။ သင်ရနိုင်လိမ့်မည်ထက်အများကြီးပိုဖိနပ်တရံသို့မဟုတ်ဖိနပ်။ အမွတ္ခေါက်၊ကောင်းစွာဆောင်လက်စောင့်၊စောင့်၊စောင့်-အထူးအအေးဂျင့်ဤလုပ်နိုင်။ ဒါဟာကိုယ့်တစ်ဦးသိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်အလွန်သတိထား။ ဒီမဟာဗျူဟာဖွံ့ဖြိုးပြီးခဲ့သည်၊နှင့်လည်းအလုပ်လုပ်၏အချက်အကောင်အထည်ဖော်စီစဉ်။ ဒီပုံထဲကအများဆုံးရ။ ဒါကြောင့်၊နောက်ထပ်တစ်ခါ၊အဆိုပါရည်မှန်းချက်၊ယောက်ျားအဖြစ်ဟုခေါ်ကြသည်"အမဲလိုက်"။ အဓိကရည်မှန်းချက်ဟာအလုပ်ရ။ ဤသည်အလွန်အရေးကြီးသောအချက်။ သူဖြစ်လာမှ banal၊သူလိုလား။ အကျိုးစီးပွား။ လိုလျှင်၊ဥပမာအားဖြင့်၊အမြင်အားဖြင့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အစပြုမှာတစ်ပါတီနှင့်၊စကားပြောခန်းထဲသို့ဝင်အမျိုးသမီးများ'အခန်း၊ဒါကြောင့်စေခြင်းငှါရှိသည်"မတော်တဆ"ရှောက်သွားအဖီး၊စိတ်ဝင်စားခဲ့။ အကြိမ်ရှိနေဆဲမှာမျက်စိအဆင့်။ နှစ်စက္ကန့်များ၏မျက်စိအဆက်အသွယ်(ဂန္ထဝင်ဒါပေမယ့်ထိရောက်သောလှည့်ကွက်။) အမှု၌သင်တို့ကိုပိုက်ဆံအများကြီးရှိသည်၊သင်ကရနိုင်လိမ့်မည်ထက်အများကြီးပိုသင်နိုင်တတ်နိုင် ခွင့်ပြုပါ။ ငါသေချာပါတယ်သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အရာတစ်ခုခုနှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်။ ဤနည်းသင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုအထဲကအများဆုံးရ။ ဒီဘက်ပါ၊သငျသညျနိုင်လိမ့်မည်ဟုအထဲကအများဆုံးရရန်သင်၏အချိန်နှင့်အတူသင့်မိသားစု။ ပြီးပြည့်စုံသောလမ်းအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အမှုအရာသည်ရိုးရိုးလေးမှစတင်အချင်းချင်းသိရန်။ ဒီအလုပ်လုပ်တယ်အတွက်အရေးအပါဆုံးအချိန်လေး။ အဆုံးစွန်သောနည်းလမ်းကိုရရှိတောက်ပတဲ့အပြုံးမှရှိသမျှလက်နက်၊ဒါပေမယ့်မသိမသာနှင့်တိကျသောစကားလုံး။ လမ်းဖြင့်၊ထိုသို့အလွန်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဟာသက။ အတွက်အီတလီလုပ်ငန်းရှင်အဖြစ်လူသိများ Flavio Briatore၊ကံဇာတာရှိပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုတဦး၏'$သန်း ၁၅၀ ကိုနည်း:"ငါချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌လဲကျ၊နှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦး။" များစွာသောလှပချစ်စရာမိန်းကလေးငယ်များကြိုးစားခဲ့ကြ၊အမှန်တကယ်လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်မအထင်သင်လုပ်နိုင်တယ်။ ကျွန်မစိတ်ဝင်စားခဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်ကျွန်မနဲ့အတူပါဝင်ချင်၊ဒါကြောင့်ယူသုံးမိနစ်အင်တာဗျူးအမေးမှသူတို့ကိုအကြောင်းစဉ်းစား။ သင်ပြောနိုင်ဒါဟာအားလုံးသည်သင်ဟာအကြောင်း။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအစီအစဉ်၊နှင့်ဤ။ အခြေအနေပြောင်းလဲသွားပြီ။ မဆိုအမှု၌၊ပြုံးနှင့်အတူသင့်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာ၊သင်ပေးနိုင်ပါသည်အသီးအသီးအခြားနှင့်အတူလိုအပ်။ ဖား။ ငါသည်အဘယ်သို့သိရကြဘူးဆိုသည္။ သငျသညျမဆိုမေးခွန်းများရှိပါကအကြောင်းအဘယ်မှာရှိနှင့်မည်သို့အောင်မြင်ရန်အကောင်းဆုံးရလဒ်အတွက်၊ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ်ပေးပါ။ ဤအဆိုအရမင်းသားဆိုရင်၊သင်ကြိုးစားနိုင်ပါနှင့်အပေါ်ရေတွက်စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှုအတွက်အားလုံးအထူးကု၊ထိုအခါလွှမ်းခြုံအစောပိုင်းကလည်းဖြစ်မီ။ ဒီအောင်မြင်စေလိမ့်မည်ဟုသင်စဉ်းစားမိသောအခါသင်ဖြစ်လာချင်စင္ဒ။ ကျွန်တော်ပြောချင်မှပြောကြောင်းကင်ဆာ၊နှင့်ပျံသန်းချိန်အားဖြင့်။ ရှိပါတယ်သောသူတို့အတွက် Dankaygan။ ကခက်ခဲအနိုင်ရတဲ့ဆုချီးမြှင့်ဘို့အထိုကဲ့သို့သောခံစားချက်များ၊ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်အခက်နှင့်အတူလှပနှစ်လိုဖွယ်မဲ့သွားပြီ။ ငါသည်အဘယ်သို့သိရကြဘူးဆိုသည္။ သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်း၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ရှိသည်လိမ့်မယ်နောက်ထပ်အစည်းအဝေး။ အစည်းအဝေး။ ဤသည်၏ပထမဦးဆုံးသောနေ့ရက်စာချုပ်။ ဒါကြောင့်လည်းဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက်။
အကယ္ပြန်ကြားချက်မှုနှုန်းနိမ့်သည်၊ဒါကြောင့်နည်းလမ်းများကြောင်းအသုံးပြုသူမရှိသလောက်ပြန်ကြားချက်။ ရဲ့လျှင်အမြင့်ဆုံး၊အသုံးပြုသူအများကြီးပိုဖွယ်ရှိသည်ပြန်ကြားချက်။ ဓါတ္ပံုမ်ားကိုခဲ့ကြကြောင်း"အဖြစ်မှတ်သားမဂုဏ်"ကိုသာအားဖြင့်ကြည့်ရှုကြသူအသုံးပြုသူများမှအမြင်ဆှအကြောင်းအရာ။ သင်အကြောင်းကိုပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်ဒီကိုပြောင်းလဲသင့်ရဲ့ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုအပိုင်းမှာ"အထိမ်းအမှတ်ဓာတ်ပုံအဖြစ်"ဂုဏ်"အဖြစ်၊ဒါကြောင့်လိမ့်မည်အဖြစ်သာမြင်ကြသူအသုံးပြုသူများမှသဘောတူကြည့်ရှုရန်နှိုးဆှအကြောင်းအရာ။ သင်အကြောင်းကိုပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်ဒီကိုပြောင်းလဲသင့်ရဲ့ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုအပိုင်းမှာ"ရှာမရရှိနိုင်ကြပြီဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ပိတ်"သင့်ပရိုဖိုင်ပါဝင်ရှာဖွေရေးအတွက်"။
ဤစာမျက်နှာကိုသင်ကူညီလိမ့်မည်အလျင်အမြန်နဲ့အလွယ်တကူရှာဖွေလိပ်စာသင်လိုအပ်အပေါင်းတို့နှင့်သတင်းအချက်အလက်အကြောင်းအမော်ဒယ်၏ရွေးချယ်မှု၏။ ငယ်ရွယ်ကြသည်မဟုတ်သူလူများအရွယ်ရောက်သည်နှင့်အညီပညတ်တရားကိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သောလူများအတွက်ကိုယ်ကျင့်တရားသို့မဟုတ်အလားတူအကြောင်းရင်းများကြောင့်တိုက်ရိုက်တောင်းဆိုချက်ထိုကဲ့သို့သောဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်ဤပူဇော်။ အောက်ပါစာမျက်နှာများဆံ့ဆှပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းထို့ကြောင့်များအတွက်သာရည်ရွယ်။ အားဖြင့်ရိုးရှင်းစွာအပေါ်ကိုနှိပ်"မဝင်ရ"ကျွန်ုပ်တို့ ။ ဥပဒေရေးရာ:ဤစာမ်က္ႏွာတြင္စာသားနှင့်ရုပ်ပုံများဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှိုးဆှ။ ထိုကွောငျ့၊သင်ရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်စာမျက်နှာများသို့မဟုတ်ရှိမရှိစစ်ဆေးဆှအစာသားနှင့်ရုပ်ပုံများစဉ်းစားနေကြတယ်ထိုးစစ်သို့မဟုတ်လျှင်သူတို့ရောက်ရှိဥပဒေကြောင်းအရအသက်(၁၅ နှစ်)၊လက်ခံရန်ဤဝေါဟာရများကိုအသုံးပြုပါ။ နိုင်ရန်အတွက်အဆက်မပြတ်ပိုကောင်းနှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ကျနော်တို့အကြံပြုပါသည်ကိုကွတ်ကီးများအသုံးပြုမှု။ ဆိုက်ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်၊သငျသညျသဘောတူရန်ကွတ်ကီးများအသုံးပြုခြင်း။ အသေးစိတ်အချက်၊ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ညွှန်းကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ။
ပေမယ့်အရေ၏ပထမဦးဆုံးနှစ်အမျိုးသမီးဆေးသမားသည်ထင်၊သူတို့သုံးစွဲဖို့ပိုနှစ်သက်သည့်လည်ပတ်တက်ဘလက်အနည်းငယ်အဘို့အအမျိုးသမီး။ နီးပါးမှာနှစ်ဆယ်တရာ၊အနှုန်းအတွက်လည်ပတ်ရုပ်ရှင်ရုံမဟုတ်ပါဘူးသာစိန္ပန္း။ အလွန်အမင်းလေးလံသောဝန်ကြီးတာဝန်၊ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါပိုး၊နှင့်အနည်းဆုံးနာကျင်မှုမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်ကရုဏာ-ဤအဖုံဖုံသောအမွေးများအပြားတွင်အမျိုးသမီး။ သို့သော်၊ပိုပြီးအမျိုးသမီးနှင့်အဟောင်းအမ်ိဳးသားစခန်းကြသည်။ ကြေးမုံသိရုပ်သံအလိုက်အမျိုးသမီးခွဲစိတ်အတွက်သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်လက်တွေ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်။ အကြားလည်ပတ်မှုအခန်း၊ ကွက်နှင့်ပထမဦးဆုံးအကူအညီ၊သူတို့ကအကြောင်းပြောဆိုရန်စိတ်အားထက်သန်အလုပ်နှင့်ဒုက္ခအပေါ်လမ်းထိပ်။ ရဲ့။ တချိန်တည်းမှာ၊သင်အတည်ပြုကြောင်းကိုသင်ဖတ်ပြီးပါပြီဖိုင်တွေတင်ဖို့သင်တို့အပေါင်းတို့နှင့်အခြားဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်နှင့်ပတ်သက်သောလိုအပ်။ အမှုအတွက်အချိုးအလက်များတတိယပါတီသို့မဟုတ်ဒေါင်းလုဒ်အရွယ်ရောက်အကြောင်းအရာ၊ညာဘက်ကျနော်တို့ချန်ထားသောဖိုင်တွေကိုဖျက်။
တိုက်ရိုက်ချက်တင်ဆော့ဗ်ဝဲဖို့အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်စကားပြောသင့်ရဲ့ဖောက်သည်များနှင့်စစ်မှန်သော-အချိန်ထောက်ခံမှုများအတွက်ကွန်ရက်စာမျက်နှာဧည့်သည်များ။ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သင့်ရဲ့ဖောက်သည်များနှင့်အတူစောင့်ကြည့်ဖို့နဲ့သင့်ရဲ့ဆိုက်ကိုအမှန်တကယ်အချိန်အတွက်၊ဒါကြောင့်ဧည့်သည်များလိုက်လျှောက်နိုင်အရာအားလုံးကိုဖြစ်ပျက်တစ်ခုအတွက်။ သုံးတိုက်ရိုက်ချက်တင်အဲဒါကိုပြောင်းလဲပစ်ဖို့အကြောင်းဒါကြောင့်ဒါဟာအပြည့်အဝပွဲများ၏ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ခံစား၏။ ပေါင်းစပ်၏ချက်တင်သို့မည်သည့်အမျိုးအစားအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုသို့မဟုတ်စျေးဝယ်လှည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူ။
အလှဆုံးမိန်းကလေးလောကအတွက်၊အသစ်အတန်းအစား၊အထင်ကြီးဖို့ကြိုးစားနေရုန် သော်လည်းသူ၏ကြီးမားသောနှာခေါင်းနှင့်အနုပညာစွမ်းရည်ထို့ကြောင့်အကြံပြု။ အထုပ်ကအလှဆုံးမိန်းကလေးလောကအတွက်၊သူအလှဆုံးမိန်းကလေးအတွက်လော? ဤမေးခွန်းအတွက်၊ ရဲ့အဖြူရောင်ကိုနှစ်သက်၊အနီ့ (ရုန်)၊အဖြေရှင်း:သူ့အဘို့၊လူတွေပိုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာနေသော (လ)။ ဤသည်သူမ၏နောက်ဆုံးကျောင်းလေယာဉ်နှင့်အခုတော့သူနောက်ကျော၌သူ၏စာသင်ခန်း။ အတွင်းအထက်တန်းကျောင်းမှခရီးဘာလင်၊သူတို့မိတ်ဆွေများဖြစ်လာခဲ့သည်။ တစ်ခုတည်းသောပြဿနာကို ရှိပါတယ်တော်တော်လေးကြီးမားတဲ့နှာခေါင်းနှင့်ထို့ကြောင့်သူသည်အရှက်၊သူရှာဖွေတွေ့ရှိရဲလ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာများအတွက် သောကြောင့်၊သူမ၏နှင့်အတူလမ်းမရှိ ဝန်ခံ။ သို့သော်၊ ရေးသားခဲ့သည်သီချင်းနဲ့စာသားမက်ဆေ့အ ၊ဒါပေမယ့်မပါဘဲသူတို့ကိုအသိအမှတ်ပြု။ သို့သော်၊ အတွက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားခင်း၊သူလှပသောဒါပေမယ့်မအတောက်ပ၊ အသုံးပြုကိုခုခံကာကွယ်ဖို့မိမိအလုပ်ကနေခင်း၊အထူးသဖြင့်အများအတွက်မိမိအိပ်မက်မိန်းကလေးထံမှအ ချဉ်းကပ်၏။ ပြောင်ကိုက္ခံ၊ဂျာမန်၊ဆယ်ကျော်သက်ရုပ်ရှင် ပြောင်ကိုက္ခံပစ်ခတ်ခဲ့သည်ဇာတ်ခုံပေါ်မှာအားဖြင့် ၊အဘယ်သူသည်ယခင်ကညွှန်ကြားထားကဲ့သို့သောအနောက်တိုင်းမှာဖြစ် သို့မဟုတ်သေဆုံး ၊ သေ သာက္ရင္။ အလှဆုံးမိန်းကလေးအတွက်ကမ္ဘာသည်ခေတ်သစ်ဂျာမန်စာပေကိုလိုက်လျောညီထွေ၏အော်ပရာ"ႏ"၊အဖြစ်ရေးသားသောပြဇာတ်ရုံ ။ ပြင်သစ်စာရေးဆရာနှင့်ကဗျာဆရာ၏အဲဒီအချိန်ကနောက်တဖန် သူ၏ဇာတ်လမ်းမှအစစ်အမှန်အသက်တာ၏ႏႏ၊ဖှယျ၊ဒါပေမယ့်များစွာသောအမှုအရာအဘို့အရာအသစ်များနှင့်အတူတက်လာ။ ဇာတ်လမ်း၏ႏ ခဲ့သောထပ်တလဲလဲအဖြစ်အသုံးပြုရုပ်ရှင်မြင်ကွင်းတစ်ခု။ တို့တွင်အအကျော်ကြားဆုံးဖျော်ဖြေပွဲအမည်စာရင်းတင်သွင်းများအတွက်ဆုချီးမြှင့်"အော်စကာ"ဒရာမာ၏ႏ တူရတ် အတွက်ခေါင်းစဉ်အခန်းကဏ္ဍကိုတစ်ခေတ်၏လိုက်လျောညီထွေ တူတိဗ်မာတင်ခေါင်းစဉ်အခန်းကဏ္ဍကိုအတွက်။ (ဆင်ရန်)
လိပ်စာအတွက်နေ့တွေအများကြီးယောက်ျား၏အိပ်မက်ဒါပေမယ့်အလွန်နည်းပါးနေတယ်အဲဒီအကြောင်းသွားဖို့အရေးယူခြင်း(မရေတွက်ပုတ်သော၊ချီးမွမ်းအမျိုးသမီးအဖြစ်ရှေ့တော်၌ထိုအသားလုပ်ငန်းစဉ်၏****သည့်အခါသူတို့ကငြင်းရပ်တန့်)။ ကျွန်တော်မာနထောင်လွှားဖြစ်ပြသရန်ပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေးတစ်ခုအပြည့်အဝဝှကျကင်မရာ။ အဘယ်ကြောင့်ထွက်သွားဖို့အတွက်ကလပ်သို့မဟုတ်ဘားတန်းနှင့်မျက်နှာအများကြီးအခက်အခဲများ(၊ဆူညံသံ၊ပြိုင်ဆိုင်မှု၊အရက်)သောအခါသင်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ထိုသို့တွေ့ဆုံနေ့စဉ်။ သင်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူချင်ကြဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်ငါကဲ့သို့သော။
Los árabes, su punto de vista. Hombre árabe negra mujer de la relación de pareja. Chicas Preguntan Los Chicos
ချိန်းတွေ့ဘို့အအခမဲ့များအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး ချိန်းတွေ့ဆိုက် ၁၈ ဗီဒီယိုများ သိမှရမြို့ ငါလိုချင်တာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့သင် ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များ ၁၈ နှစ်အခမဲ့ အမျိုးသမီးချိန်းတွေ့ ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့နှင့်အတူမိန်းကလေးစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း သင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါ အွန်လိုင်းတွေ့ဆုံရန်